डेल आयाम B110 बजेट डेस्कटप कम्प्युटर समीक्षा
मार्गदर्शकहरू खरीद गर्दै डेस्कटपहरू
डेल आयाम B110
by मार्क किरिनिन
डेल आयाम B110 डेस्कटप कम्प्यूटर प्रणाली अब कम्पनी द्वारा उत्पादन गरिएको छैन तर यो अझै पनि दोस्रो हात मार्केटमा फेला पार्न सकिन्छ। यदि तपाइँ नयाँ न्यून लागतको डेस्कटप कम्प्यूटरको खोजीमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया उपलब्ध डेस्कटप पीसीहरू हालै उपलब्ध प्रणालीहरूको लागि $ 400 सूची अन्तर्गत जाँच गर्नुहोस्। डेलले यो प्रणालीको साथमा एक मनिटर समावेश गर्दछ तर थप नयाँ डेस्कटपले यसलाई बेच्न बिकाउँछ। तपाईं केहि किफायती प्रदर्शनका लागि सर्वोत्तम 24 इन्च एलसीडी मोनिटरहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Apr 11 2006 - डेलको आयाम B110 प्रणाली एक आधारभूत कम्प्यूटर प्रणालीको रूपमा मार्केट गरिएको छ, र यो वास्तवमा के हो। यो समस्या बिना आधारभूत उत्पादकता कार्यहरू सञ्चालन गर्नेछ तर यो निश्चित रूपमा Dell को कम लागत E310 प्रणालीको रूपमा एउटै विशेषताहरू पूरा गर्दैन। यो विशेष गरी सबैको लागि निराशाजनक छ जुन यसले उन्नयन गर्न आशा गर्दछ किनकी यसले धेरै उन्नत पोर्ट र स्लॉट्सको कमी छ। कम से कम डेल ले यसका लागी एक नयाँ एलसीडी मनिटर र एउटा ठूलो हार्ड ड्राइभ समावेश गर्दछ।
फ्लैट प्यानल मनिटर समावेश गर्दछ
यसको मूल्य दायराको लागि ठूलो हार्ड ड्राइवको साथ Comews
ग्राफिक्स अपग्रेडहरूको लागि Lacks एजीपी वा PCI एक्सप्रेस ग्राफिक्स स्लॉट
सीमित सफ्टवेयर प्याकेज
डिजिटल क्यामेरार्डर र भण्डारणको साथ प्रयोगको लागि कुनै FireWire पोर्टहरू छैनन्
इंटेल सीलोरोन डी 325 (2.53GHz) प्रोसेसर
512 मेगाबाइट पीसी 3200 डीडीआर मेमोरी
160GB 7200rpm ATA हार्ड ड्राइभ
16x डीभिडी +/- आरडब्ल्यू डब्लुड लेयर बर्नर
Dell A215 स्टीरियो स्पीकरहरूको साथ AC'97 अडियो
64MB साझा मेमोरीको साथ इंटेल चरम2एकीकृत ग्राफिक्स
17-इन्च डेल E176FP एनालॉग एलसीडी मनिटर
छ USB 2.0 पोर्टहरू
विन्डोज एक्सपी घर र वर्डफेस्ट 12 शब्द प्रोसेसर
गाइड समीक्षा - डेल आयाम B110
Apr 11 2006 - डेलको नयाँ आधारभूत डेस्कटप कम्प्यूटर प्रणाली, आयाम B110, इंटेल Celeron D 325 डेस्कटप प्रोसेसर द्वारा संचालित छ। यो धेरै बजेट फास्ट प्रोसेसर होइन जब तुलना गर्दा धेरै बजेट डेस्कटपहरूमा प्रस्ताव गरिएको छ, तर यो उत्पादकता सफ्टवेयर र इन्टरनेट अनुप्रयोगहरूका लागि पर्याप्त छ जुन प्रणालीको लागि डिजाइन गरिएको छ। यो 512MB PC3200 डीडीआर मेमोरी संग मेल खाएको छ जुन बजेट प्रणालीको लागि लगभग मानक हो।
आयाम B110 को लागि भण्डारण एकदम राम्रो छ। प्रणाली 160GB हार्ड ड्राइवको साथ आउँछ जुन आधारभूत उत्पादकता डेस्कटप प्रणालीको लागि पर्याप्त भण्डारण प्रदान गर्नु पर्छ। यो संगीत, चलचित्र वा डेटा सीडी र डीभिडी बनाउनका लागि 16x डीभिडी +/- RW दोहोरो तह बर्नरको साथ पनि आउँछ। अन्य आयाम प्रणालीहरूको विपरीत भए तापनि यसले डिजिटल परिधीय मेमोरी कार्डहरूसँग इन्टरफेस गर्नको लागि मिडिया कार्ड पाठकको कमी छ। बाह्य परिधीयहरूसँग प्रयोगको लागि छ USB 2.0 पोर्टहरू र तिनीहरूका लागि जुन प्रणाली खोल्न अतिरिक्त भण्डारण थप्न चाहन्छन्। यसले उच्च स्पीड बाह्य भण्डारण प्रणालीहरू वा डिजिटल क्यामेरार्डरको प्रयोगको लागि फायरवायर पोर्ट देखाउँदैन।
आयाम B110 बाट ग्राफिक्सको सन्दर्भमा धेरै अपेक्षा नगर्नुहोस्। यसले इंटेल चरम2एकीकृत ग्राफिक्स प्रयोग गर्दछ जुन 64 मेमोरी मेमोरीको प्रयोग गर्दछ। 3D प्रदर्शन यस्तो छ कि यो पनि पीसी खेलहरूको सबैभन्दा आधारभूत खेल खेल्न सक्दैन। प्रणालीमा उन्नयन गर्न प्रणालीमा AGP वा PCI एक्सप्रेस ग्राफिक्स कार्ड स्लटको पनि कमी छ। प्लस साइडमा, प्रणाली मानक 17-इन्च फ्ल्याट प्यानल एलसीडी मनिटरसँग ब्रोयरियर CRT भन्दा मानक हुन्छ।
प्रणालीमा खरिद गर्न को लागी, डेलले मात्र Word Perfect 12 शब्द प्रशोधन कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। अझै पनि, तलको बजेटको लागि जुन पूर्ण कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता छ, आयाम B110 ले एक सभ्य उत्पादकता पीसी प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह अधिक र अधिक कम्पनीहरु को अधिक trialware र adware आफ्नो सिस्टम मा लोड गर्न शुरू गर्दै छन् यो वास्तव मा एक लाभ हुन सक्छ।
जब किफायती हुँदा, डेलको आयाम E310 त्यो धेरै खर्च गर्दैन र ग्राफिक्स कार्डहरूसँग राम्रो प्रदर्शन र विस्तार गर्न क्षमता प्रदान गर्दछ। फरक छ कि यो भण्डारण ठाउँ को मात्रा घटाउँदछ र धेरै स्पेशर 17-इन्च CRT मनिटरमा आउँछ जुन धेरै स्थान लिन सकिन्छ।
2018 मा खरीद गर्न6उत्तम-खोजी पीसीहरू
सर्वश्रेष्ठ गृह थियेटर व्यक्तिगत कम्प्युटर
तपाईंको आवश्यकताको लागि दायाँ डेस्कटप पीसी खरीद गर्दै
गेटवे NV77H05u 17.3 इन्च डेस्कटप प्रतिस्थापन ल्याप्टप पीसी
गेटवे वन ZX6980-UR308 23-इन्च सबै-इन-वन पीसी
2018 मा खरीद गर्न6सर्वश्रेष्ठ $ 400 देखि $ 1,000 डेस्कटप पीसीहरू
उन्नत Arduino परियोजनाहरु को मध्यवर्ती
तपाईंको एन्ड्रोइड फोनमा कसरी अपडेटहरू जाँच गर्नुहोस्
स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के हो?
सबटोर र द ए-टिम: अनियमित एटारी 2600
आईफोनमा कसरी सेट अप र प्रतिबन्ध प्रयोग गर्नुहोस्
के एलईडीको लागि के हो?
कसरी समाधान गर्नुहोस् Advapi32.dll फेला परेन वा त्रुटिहरू हराइरहेको छ
एक PowerPoint तस्वीर पृष्ठभूमि सिर्जना गर्नुहोस्
VoIP ग्राहक के हो?
तपाईंको अनलाइन क्रेपर्सबाट लुकाउनुहोस्
PS2 को लागि "ला रश" धोखा र गोपनीयता
GTL ध्वनि ल्याब्स एई963 इन-पर्खाल लाउडस्पिकर - फोटो प्रोफाइल
Apple's TV App: तपाईलाई थाहा छ
पुनःप्राप्ति कन्सोल आदेशहरू
आइपॉड टच क्यामेराको बारेमा सबै
Android मा SIP प्रयोग गरी नि: शुल्क वा सस्तो कलहरू सिक्नुहोस्
HD रेडियो बनाइयो उपग्रह रेडियो: तपाईलाई कुन कुरा प्राप्त गर्नु पर्छ?
भाइरस साँच्चै एक भाइरस छ भने बताउन सजिलो तरिका